SAADAAL: Paul Scholes Oo Saadaaliyay Kooxda Koobka Premier league Ku Guulaysan Doonta, Afarta Kaalmood Sare Sida Loo Kala Buuxin Doono Iyo Saadaashiisa Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta PL. – GOOL24.NET
SAADAAL: Paul Scholes Oo Saadaaliyay Kooxda Koobka Premier league Ku Guulaysan Doonta, Afarta Kaalmood Sare Sida Loo Kala Buuxin Doono Iyo Saadaashiisa Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta PL.
August 17, 2018 Mahamoud Batalaale
Halyaygii hore ee xulka qaranka England iyo kooxda Manchester United ee Paul Scholes ayaa waraysi dheer oo uu bixiyay waxa uu ku saadaaliyay kooxda xili ciyaareedkan cusub ku guulaysan doonta koobka Premier league iyo waliba afarta kooxood ee kaalmaha sare ee Champions league loogu soo baxo ku dhamaysan doona.
Paul Scholes ayaa sidoo kale ka jawaabay xidigaha u sharaxan abaal marinta kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league isaga oo si toos ah u bixiyay waxa uu ka aaminsan yahay xili ciyaareedka cusub. Paul Scholes ayaa saadaashan bixiyay kadib markii uu daawaday kulamadii furitanka ee Premier league.
Ugu horayn Paul Scholes waxa uu si toos ah uga jawaabay su’aal laga waydiiyay kooxda xili ciyaareedka cusub noqon doonta Championska England wuxuuna sheegay in Manchester City ay tahay kooxda markale ku guulaysan doonta Premier league.
Paul Scholes oo arintan ka jawaabaya ayaa yidhi: “Anigu waxaan filayaa in Manchester City ay markale Premier league ku guulaysan doonto. Sanadkii hore waxay horyaalka ugu gulaysteen fogaan badan isla markaana waxay u muuqdaan in ay u fiican yihiin si abid ka fiican, maalintii kale ayaan iyaga arkay, sidaa daraadeed waxaan filayaa in ay horayalka ku guulaysan doonaan.
Paul Scholes ayaa la waydiiyay afarta kooxood ee kaalmaha sare kaga dhamaysan doona Premier League xili ciyaareedkan cusub wuxuuna yidhi: “Ma ogin waxay Chelsea la mid noqon doonto, ma ogin waxa ay Arsenal tababaraha cusub kula mid noqon doonto, laakiin waxaan ku tagayaa in City ay horyaalka ku guulaysato, Liverpool kaalinta labaad, Manchester United kaalinta saddexaad, waxaanan ku tagayaa Tottenham oo kaalinta afraad ah”.
Paul Scholes oo ka jawaabaya cida kabta dahabka ah ku guulaysan doonta ayaa yidhi: “Waxaan ogahay in fursadaha ugu badan ay City samayn doonto, taas wax shaki ahi kama jiro. Miyuu Augero dhamaantood taam u noqon doonaa?. Haddii Aguero uu kulan kasta ciyaaro, midka kowaad ayuu aniga ahaan noqon doonaa, laakiin ma dhaafi karno Harry Kane”.
Paul Scholes oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Waxaan filayaa in isagu (Kane) uu yahay weerar yahan dhexe oo cajiib ah, waxa uu sidoo kale qaataa rekoodhayaasha, waxa uu qaataa laagaga xorta ah, wax walba wuu qaataa, sidaa daraadeed, waxaan Golden Bootka uga tagayaa Harry Kane”.